शक्तिशाली भूकम्प, ८ को मृ*त्यु, ६० भन्दा बढी घाइते
पाेखरा साउन ११- फिलिपिन्समा गएको भूकम्पमा परी ८ जनाले ज्यान गएकाे छ । ६० भन्दा बढी घाइते अस्पतालमा भर्ना भएका छन् । फिलिपिन्सको बातानेस प्रान्तमा एकै दिन दुई पटक भूकम्प जाँदा बढी क्षति पुराएकाे थियाे ।
शनिवार सबेरै देशको उत्तरमा पर्ने बातानेस प्रान्तमा ५. ४ र ५. ९ म्याग्निट्युडको भूकम्प गएको हो।
उक्त प्रान्तमा कैयौँ टापु छन्। मेयर राउल डे सागोनले करिब ६० जना घाइते भएको बताएका छन्। भूकम्प जाँदा धेरै मानिसहरू घरभित्रै रहेको बताइएको छ। भूकम्पपछि सुनामी आउन सक्ने चेतावनी जारी गरिएको छैन। एकजना प्रहरी अधिकारीले समाचार संस्था एएफपीलाई भने, “मैले घरहरू हल्लिरहेको देखेँ। केही घरका पर्खाल ढले र मानिसहरू च्यापिए।
“बिहानको मीठो निद्रामा भएकाले भाग्न नपाएर केही मानिसहरूले ज्यान गुमाए।” फिलिपन्सको रेडक्रसले सामाजिक सञ्जालमा राखेका तस्वीरहरूमा घरहरू भग्नावशेषमा परिणत भएको देखिन्छ। फिलिपिन्स भूकम्पीय गतिविधि धेरै हुने क्षेत्रमा पर्छ। त्यसैले धेरै मानिसकाे ज्यान जानुकाे कारण बिहानीपख भएर हाे ।